I-Google Pixel 2 XL ihamba ngezandla ze-iFixit | Iindaba zeGajethi
IGoogle Pixel 2 XL ihamba ngezandla ze-iFixit
Kuze kudlule i-smartphone entsha ezandleni zabafana kwi-iFixit, uninzi lwabasebenzisi abangagqibi ukuyithenga okanye hayi. I-iFixit iyakhathalela ukungazidibanisi ngokupheleleyo iitheminali ezintsha ezifika kwimarike ukujonga ukuba ngaba ulungiso lulula okanye ukuba ngokuchaseneyo akunyanzelekanga ukuba sizikhathaze ngokuyisa kwiziko lenkonzo.
Amanqaku esiwanikwa yi-IFixit ukusuka ku-1 ukuya ku-10, nge-10 kukulungiswa okuphezulu kwesixhobo ngelixa i-1 ibonisa ukuba singayiphosa ngqo kudoti. Isixhobo sokugqibela esidlulile kwizandla ze-iFixit ibiyiGoogle Pixel 2 XL, isiphelo sendlela wonke umntu athetha kakhulu ngayo kwaye, ngokwe-DxOMark, inekhamera ebalaseleyo kwintengiso.
UGoogle, ngokungafaniyo nabavelisi abaninzi, akakhethanga ukufaka iikhamera ezimbini ukonwabela imo yomzobo, kodwa wonke umsebenzi wenziwa yiprosesa eyilelwe ngokukodwa iPixel Visual Core. Emva kokudibanisa ngokupheleleyo nokuphinda udibanise iGoogle Pixel 2 XL, abafana baseFixit bayinike amanqaku ayi-6 kwali-10 kunokwenzeka, inqaku elingalunganga kwaphela xa sithelekisa namanqaku afunyanwa ziitheminali zeSamsung, nangona singenako ukuzithelekisa ngenxa yoyilo lwesikrini, olwahluke kakhulu kwiPixel 2 XL kaGoogle.
I-iFixit ime njengamanqaku aqinisekileyo ezinye izinto ezinjengekhamera kunye nezibuko le-USB-C, kunye namaqhosha asecaleni, ziimodyuli, ke akukho ngxaki ekutshintsheni ukuba besinengxaki nazo. Elinye inqaku elilungileyo lifumaneka kwizikhonkwane ezisetyenzisiweyo, uPhillips # 00, osivumela ukuba sidibanise i-terminal ngaphandle kokutyala imali kwizikulufu ezithile.
Ngoku siqala ngamanqaku angalunganga kangako, ngenxa yokuncamathelisa okusetyenziselwa ukulungisa isikrini, Ukuvula isiphelo sendlela kuya kubangela umonakalo kwizithambiso ibalulekile kwimiphetho yayo, njengoko sinokubona kwividiyo. Ukuba sifuna ukutshintsha ibhetri kufuneka siphantse sigqibezele ngokupheleleyo isiphelo sendlela kodwa kufuneka silumke kakhulu kwinkqubo kuba intambo yesikrini ayinangxaki kwaye sinokuyaphula ngokulula.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » IGoogle Pixel 2 XL ihamba ngezandla ze-iFixit
I-Romeo Power isungula 'iSaber' ibhetri yangaphandle enokwenza nantoni na